विदेशमा कि डेथ् हुन्छ कि त डिप्रेसन! - Everest Dainik - News from Nepal
विदेशमा कि डेथ् हुन्छ कि त डिप्रेसन!
लागूऔषधको कुलतमा गम्भीर रूपमा फसेको रहेछ केटो । लागूऔषध प्रभावकै कारण उसले चरम शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसा गरिरहेको छ । म सहन नसक्ने अवस्थामा छु । मलाई यो नर्कमा बस्नु छैन । म आफ्नै देशमा फर्कन चाहन्छु । म बाँच्न चाहन्छु । आफ्नो पीडा कसैसँग बाँड्नसमेत नमिल्ने यो परदेशबाट म छिटै घर फर्कन्छु ।’ केटी स्वदेश फर्कंदा उनको मुहार सबैलाई देखाउन मिल्ने अवस्थामा थिएन ।
दुई बाली खेती र दुईचारवटा भैंसीबाख्रा पालेर जसोतसो पेट पालिने नेपाली समाजमा विदेशबाट ‘पैसा कमाइने’ तथ्य बुझेपछि त्यता लाग्नेको लर्को थामिनसक्नु छ । यहाँ हाम्रो जिन्दगी सहज छैन, सत्य हो । आफैंले भोगेका कारण हामी त्यसो भन्न सक्छौं, तर परपरको अवस्था के छ जानेले पनि हतपत भन्दैनन् । किनकि ती त्यहाँ पुगिसकेका हुन्छन् ।
आफू पुगेको ठाउँका बारेमा हतपत ननिको कसले बोल्छ र ? त्यो पनि पैसो र इज्जत कमाउन जाने ठाउँ बन्यो परदेश । हाम्रो पालामा होइन, बाउबाजेकै पालामा पनि विदेशबाट आएका लाहुरेको सर्वत्र इज्जत बेग्लै हुन्थ्यो । गाउँमा टेपरेकर्डर मात्रै बोकेर पस्नेको कत्रो फूर्ति थियो दुई दशकअघिसम्म । क्यासेट प्लेयर र क्यामेरा हुनेलाई बेग्लै कोटीमा गन्थ्यो समाज डेढ दशकअघिसम्म । हामी पनि अहिले इज्जतका भोका भयौं । इज्जत अर्थात् ठाँटबाँट र सान । विदेश गएर घरको धुरीमा एन्टेना हालेर टिभी हेर्नेहरू बढे, राम्रा ब्लांकेट, अनेक बान्कीमा सामान र प्रविधिजन्य कुरोसमेत ल्याउन थाले । पहिले अरबबाटै आउँथे यस्ता धेरै चीज । नभए त्यतैको परि श्रमबाट फलेको पैसामा खरिद हुन्थे यस्ता लक्जरीका सामान ।
याे पनि पढ्नुस वैदेशिक राेजगारमा जाने ४०% घटे, रेमिट्यान्समा भने बृद्धि
यसैबीच नेपाली अरब र मलेसिया मात्रै होइन, अनेक उपाय र तरिकाद्वारा गोराका मुलुक जान थाले । कुनै समय गोमांश खाने (गाईको मासु चल्ने) देशका रूपमा निन्दित तिनै फिरंगीको देशमा अहिले अनेक कठिनाइ झेलेर भए पनि हाम्रा ठिटाठिटी ओइरिरहेका छन् । ‘भिसै लाग्न गाह्रो’ मुलुकमा जो छिर्‍यो, त्यसले अब विशेष खालको ‘लालमोहर’ प्राप्त गर्‍यो ।
विदेश जानेबारे यसरी व्याख्या हुँदैछ कि समाजमा मानौं जीवनमा सफलताको एउटै कडी गोराको मुलुकको भिसा प्राप्त गर्नु हो । कालो र कालालाई हेप्ने समाजले गोरो र गोराको मुलुकलाई उत्पात ठान्नु अनौठो पनि होइन । परदेशको लहरले स्वदेशमा तमासा र तडकभडक बढायो । आफैंमा विश्वास नगर्ने र आफूलाई अरूभन्दा निरिह र कमजोर ठान्ने हामीले ‘लहर’ पछ्यायौं, आफ्नो मुलुकका सानातिना कहरलाई थेग्न सकेनौं ।
परिस्थिति कस्तो बन्दै छ भने कति नेपाली नचाहेरै पनि विदेशको लहरमा हेलिन बाध्य छन् । ‘ब्रिटिस लाहुरे नभए राम्री केटीले आफूलाई बिहे गर्दैनन्’ भन्ने ठानेर पहिले ब्रिटिस सिपाहीमा भिड्थे राई, गुरुङ, लिम्बूलगायत जनजाति युवा । अहिले विदेशको टे«न्ड त्यो लाहुरे ट्रेन्डभन्दा चर्को छ । घरको, आफन्तको, साथीसंगतिको माग र चर्चा धेरै भएपछि अरूकै दबाबमा पनि मुलुक छोड्ने पनि भेटिएका छन् ।
औपचारिक शिक्षा सबैलाई बोझिलो लाग्छ र हाम्रो शिक्षा छ पनि त्यस्तै । त्यसैले त्यो कहिले सकौं जस्तो हुन्छ युवा पिँढीलाई । एउटा तहको शिक्षा सकेपछि कि त कमाइको कुरो हुन्छ कि त बिहेको । अहिले सामान्य जागिर–कमाइ र सहज जिन्दगी जिइरहेको वरलाई छोरी अन्माउनुभन्दा ‘विदेश बस्ने’ ज्वाइँकै ताकमा छन् धेरैजसो । सामान्य, सहज र नेपाली जीवन जिउनेलाई वर मान्न हुनेवाला वधू पनि तयार छैनन् । विदेश गएकाको ‘ग्लामर’ नै बेग्लै । उही मरेपछि मात्रै स्वर्ग देखिए झैं विदेशै गएपछि मात्रै त्यहाँको दर्दबारे थाहा पाइन्छ । तर यहाँ विदेशको कष्टकर जीवनबारे कोही जान्न चाहँदैनन् ।
माथिको युवतीको कुरो नै गरौं न, उनलाई नेपालमै सरकारी जागिरे, एनजीओ जागिरे, शिक्षक सबै खालका व्यक्ति वधूका रूपमा रोज्न तयार थिए । घरैमा पुगेका थिए, उनको ‘हात माग्न ।’ तर उनले पनि विदेश उडेकै व्यक्ति चाहिन्, उनका अभिभावक पनि छोरीकै रोजाइमै हौसियो । हाम्रोमा ‘ब्रेन ड्रेन’ (शैक्षिक र अन्य रूपमा योग्य मान्छे स्वदेशमा बस्नै नचाहने प्रचलन) को समस्या त छँदैछ, अर्को ‘विदेश भनेकै स्वर्ग’ हो भन्ने परिकल्पना उत्तिकै हावी भएको छ । जहाज चढेर गोराका देश पुग्नेको त ठाँटबाँट बेग्लै । मानौं, त्यहाँ पुग्नेले स्वर्गका राजा इन्द्रकै स्वागत, सम्मान र खातिरदारी भेटेर आए।
आम मान्छे बुझ्दैनन्, विदेश पुग्नेबित्तिकै जोकोही ‘दोस्रो’ दर्जाका हुन्छन् । प्राय: सबै देशमा त्यहाँको बजारभाउ नेपालभन्दा बढी नै हुन्छ । कानुनी कडाइ हाम्रोमा भन्दा बढी त्यहाँ हुन्छ । रेखदेख गर्ने आफन्त हुँदैनन् । दोस्रो दर्जाको भएपछि सम्मान र सुरक्षाको विषय पनि कमै हुन्छ । सुरक्षा कम हुनेबित्तिकै महिला र युवती ‘उच्च जोखिम’ मा पर्छन् । भाषा, भोजन र संस्कृतिले विदेशमा मान्छेलाई मानसिक तनाव दिन्छ ।
आम नेपालीहरू देशभित्र खटेर काम गर्दैनन् । यहाँ हल्लेर खान पल्केकालाई उता घन्टौं खटिएर काम गर्नु नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । भाषा समस्याका कारण सम्भव भएसम्म छिमेकी भारतका नागरिकले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र हाम्रो बाध्यता बुझेपछि विदेशी मालिकले पनि शोषण नै गर्छन् । विद्यार्थी भएर विदेश बस्दा निश्चित समयभन्दा बढी काम गर्नु नै अवैध हुन्छ र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै काम लगाउने साहुजीहरूले समयमा तलब नदिने गर्छन् । बाध्यतामा कसैको खप्की खाएर काम गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै ।
कष्टले विदेशमा त्यसरी कमाएको पैसा यता घर र आफन्तले मोजमस्तीमा उडाउनेसमेत गर्छन् । अपेक्षा बढी भएपछि उपहार पनि पठाउनै पर्‍यो । यी सबैथोक थेग्न नसकेपछि विदेश भूमिमा रहेको निरिह मान्छे के गर्छ ? उसले कस्ता कदम उठाउँछ ? एयरपोर्टबाट हवाईजहाज चढेपछि सीधै स्वर्ग पुगिन्छ र त्यहाँ बोरामा पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने धारणाले जब धरातल छुन्छ, त्यहाँ कि डेथ् हुन्छ कि त डिप्रेसन । डिप्रेसनले गाँजेकाहरू माथिको वास्तविक कथामा झैं ड्रग लिन्छन् र ड्रगको आदेश तामेल गर्न आफ्ना जीवन साथीको हुर्मत लिन्छन् ।
अनमोल जीवनलाई अरूको कसीमा हेर्न थाल्नु नै ठूलो समस्या हो । पल्लाघरेको अग्लो घरको कसीमा आफ्नो सानो घरको तुलना गर्न थालेपछि तपाईं जीवन जिउनु हुन्न । तपाईं जीवन जोख्न थाल्नुहुन्छ । प्रगतिका लागि प्रतिस्पर्धी भावना अवश्य चाहिन्छ, तर न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति भएपछि पनि उतासिने र बतासिने गरेपछि जीवन जीर्ण हुन्छ । बुझौं, संसारको जुनसुकै पहाड र मैदानमा हामीले देखेकै सूर्य झुल्किन्छन् र विदेशीहरू पनि उही आकाश तल बस्छन् । खुसीको आशामा यति छोटो जीवनलाई दु:ख र प्रलयको हन्डरमा नहेलौं ।
दीपा कोईरालाको यो लेख अन्नपूर्णपोस्टबाट साभार गरिएको हो
ट्याग्स: Brain Drain, Lifestyle, migration